Warshadda Glass Wejiga Daawada / daahida | Soosaarayaasha Shiinaha ee Wejiga / daahyada Muraayadaha Glass, Soo-saareyaasha
Macluumaadka aasaasiga ah ee Yongyu Glass wuxuu ka jawaabayaa caqabadaha naqshadeeyayaasha maanta keenaya JUMBO / OVER-SIZED monolithic monvithic temirithic, qaboojiyaha, galaas la oggol yahay (labaal & saddexjibaaraal dhalaalaya) iyo galaas hooseeya illaa 15 mitir (waxay kuxirantahay muraayadda dhalada). Haddii baahidaadu tahay mid gaar u ah mashruuc, galaas la baaraandegay ama galaas biyo sabul ah, waxaan ku bixinnaa gaarsiinta adduunka oo dhan qiime aad u sarreeya. Jumbo / Muraayadaha muraayadaha amniga la kala siidaynayo 1) Muraayad quraarado kulul oo heer sare ah / Weel kululeeya ...
Muraayada SGP Laamiga La Cayriyey
Macluumaadka aasaasiga ah ee DuPont Sentry Glass Plus (SGP) wuxuu ka kooban yahay walxo caaga ah oo isku-dhafan oo ah mid la soo saaray oo u dhexeeya laba lakab oo galaas kulul. Waxay kordhisaa waxqabadka muraayadda laydhadhka ka shidan teknoolojiyadda hadda maadaama dhexdhexaadiyuhu bixinayo shan jeer xoogga ilmada iyo 100 jeer adkeynta mid ka mid ah gacaliyeyaashii hore ee PVB. SGP Feature (SentryGlas Plus) waa ion-polymer-ka etleyne iyo methyl acid ester. Waxay ku siisaa faa iidooyin dheeraad ah sida loo adeegsanayo SGP maado ahaan…
Glass Badbaadada Glass / Ilkaha Badbaadada Ilkaha
Macluumaadka Aasaasiga ah Haddii Kiradaada, Laambada La Dheereeyey ama Muraayadaha Gelmay ee Glass ay tahay Badbaado, Amni, Acoustics ama Perrmal Performance, waxaan bixinaa Alaabada tayada sare leh & Adeegga Macaamiisha. Quraarado la jeexjeexay / muraayadaha indhaha ah ee cadceedda leh Waxaa laga helayaa cabbirro badan, qaabab, iyo midabbo Radiuses ah illaa 180 digrii, radii badan, min R800mm, dhererka ugu badnaan 3660mm, dhererka ugu sarreeya 12 mitir oo cad, naxaas ah oo cawlan, cawlan, cagaar ama quraarado buluug ah galaas / koob gaagaaban oo laga heli karo noocyo kala duwan oo c ...
Unugyada Muraayadda Gelitaanka ee Hooseeya
Macluumaadka aasaasiga ah galaas-emissivity hooseeya (ama galaas hoose-hoose, gaaban) wuxuu ka dhigi karaa guryaha iyo dhismayaasha kuwo aad u deggan oo tamar badan leh. Dharka maqaarka lagu buufiyo ee biraha qaaliga ah sida lacagta ayaa lagu dabaqay galaaska, taas oo markaa ka tarjumaysa kuleylka qorraxda. Isla mar ahaantaana, galaaska-hoose wuxuu u oggolaanayaa qaddarka ugufiican ee iftiinka dabiiciga ah dariishadda. Markii looxyo badan oo galaas ah lagu daro unugyada galaaska (IGUs), iyadoo la abuurayo farqiga u dhexeeya sababayaasha, IGUs waxay xajistaan ​​dhismayaasha iyo guryaha. Xayeysiis ...
Macluumaadka aasaaska ah ee darbiyada galaaska iyo wejiga muraayadaha indhaha ka buuxaan Maxaad aragtaa markaad ka baxdo oo aad hareereyso? Dhismooyin dhaadheer! Iyagu way ku kala firidhsan yihiin meel kasta, oo waxa jira wax iyaga ka neefsanaya. Muuqaalkooda la yaabka leh waxaa lagu buuxiyaa darbiyada muraayadaha daahyada ah kuwaas oo ku darida taabasho xasaasi ah muuqaalkooda casriga ah. Tani waa waxa aan annaga Yongyu Glass ku dadaalno inaan ku bixinno qayb kasta oo ka mid ah alaabadayada. Faa'iidooyinka Kale Wejiyadayada galaaska iyo darbiyada daahyada waxay ku yimaadaan cabsi ...